अन्तर्वार्ता Archives - Living with ICT
हाम्रो उद्देश्य ग्राहकको इन्टरनेट अनुभवलाई उत्कृष्ट बनाउनु हो : प्रवीण श्रेष्ठ
प्रवीण श्रेष्ठ प्रमुख, बिजनेस विभाग, क्लासिक टेक प्रा. लि. नेपालमा इन्टरनेटको विस्तार र विकासक्रमलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? हाम्रो देशमा इन्टरनेटको विकासक्रम लगभग सन् १९९७ देखि नै भएको हो । यसभन्दा अघि सन् १९९४ को बीचतिर इमेल आदानप्रदानको सुविधा उपभोग भएको थियो । पहिले डाएल–अप कनेक्सनबाट चल्ने इमेल र इन्टरनेट हालको हाई स्पिड एटिटिएचको अवस्थामा पुग्नु भनेको प्रविधिको समयसापेक्ष उपयोग …
अबको आवश्यकता ‘इन्टरनेट अफ थिङ्स’ र ‘यु–लर्निङ’ नै हो – डा. मनिश पोखरेल
डा. मनिश पोखरेल काठमाडौं विश्वविद्यालयका एशोसिएसट प्रोफेसर हुन् । ई–गभर्नेन्स र क्लाउड कम्प्युटिङ विषयमा विद्यावारिधी हासिल गरेका पोखरेल २० वर्षदेखि प्राध्यापन पेशामा छन् । सूचना प्रविधि विज्ञकाे रूपमा परिचित डा. पाेखरेल पछिल्लाे समय स्मार्ट सिटी निर्माण अभियानमा लागिपरेका छन् । उनीसँग सूचना सञ्चार प्रविधि क्षेत्रकाे समसामयिक विषयमा कुराकानी गरेका छाैं : नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासक्रमलाई कसरी मूल्याकंन गर्नुहुन्छ ? राष्ट्रको …
फूल फ्लेजमा चल्ने आइइआर इम्प्लिमेन्टेसन सिस्टम लागू हुदैछ
मीन प्रसाद अर्याल प्रवक्ता, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण यसअघि हामी म्यानुअल सिस्टममा थियौ । अब आइएमइआर दर्तालाई अनलाइन प्रणालीमा ल्याउनको लागि एउटा सफ्टवेरको विकास गरिएको छ । अहिले परिक्षणकालमा रहेको छ । अब छिटै अनलाइनबाट आइएमआइबाट दर्ता हुन्छ । ग्रे मार्केटलाई निराकरण गर्न वाइट लिस्ट, ब्लाक लिस्ट र ग्रे लिस्टमा राख्ने व्यवस्था गर्दैछौँ । गैह्रकानुनीरुपबाट भित्रिएका मोबाइललाई ब्लक वा ग्रे …
क्यान कमटेक २०१७ सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित वृहत् प्रदर्शनी हो : सुनैना घिमिरे
कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघको आयोजनामा हुन लागेको दोस्रो संस्करणको सुबिसु क्यान कमटेक २०१७ को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यही भदौ २९ देखि ४ दिनसम्म हुने कमटेकमा सुचना र सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीका ८७ स्टलहरुको प्रदर्शनी रहनेछ । यसै सन्दर्भमा हामीले महासंघकी सचिव सुनौना घिमिरे(पाण्डे)सँग कमटेक विशेष भएर कुराकानी गरेका छौं : क्यान कमटेक आयोजना गर्नुको मुख्य उद्धेश्य के …
दूरसञ्चारको क्षेत्रमा स्पष्ट परिवर्तन देखिने गरी काम गरेका छौं : अध्यक्ष झा
Aug 28, 2017	1
दिगम्बर झा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष हुन् । २०६९ मंसिर २९ मा अध्यक्षमा नियुक्त भएका उनीविरुद्ध अध्यक्षका लागि योग्य नभएको भन्दै रिट जाहेर भएको थियो । अदालतले २ वर्षपछि मात्रै उनको पक्षमा फैसला सुनायो र त्यसयता उनले प्राधिकरण हाँकिरहेका छन् । अागामी मंसिरमा कार्यकाल सकिने उनले आफ्नो कार्यकालमा गरेका काम र पछिल्लो दूरसञ्चार क्षेत्रका विषयमा …
स्टार्टअपलाई रविको सल्लाह : बिजनेशमा ल्याउनुअघि ‘म्याक्सिमम होमवर्क’ गर्नुहोस्
रवि फुयाल उद्यमशीलता, शिक्षा र प्रविधि गरी तीन क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । उनी इन्नोभेटिभ नेपाल ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक हुन् । यो ग्रुप इनभेस्टमेन्ट र होल्डिङ कम्पनी हो जुन कम्पनीले नेपालमा विभिन्न संस्था सञ्चालन गरेको छ । फुयाल नेपाल आन्टप्रनर्स हबका समेत सह–संस्थापक हुन् । यो हबले नेपालमा दीर्घकालीन रुपमा उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्न एवं स्टार्टअप कम्युनिटीलाई सहयोग गर्न स्टार्टअप विकेन्ड, स्पार्क …
गुरु शर्मा प्रवन्ध निर्देशक, मोवाइल क्लब तपाइ लामो समयदेखि मोवाइल व्यवसायमा सम्लग्न हुनुहुन्छ । नेपालमा मोवाइलको बजारको एनालाइसिस कसरी गर्नुहुन्छ ? हिजोको तुलनामा आजको मोबाईल बजार धेरौ राम्रो छ. आरु व्यवसाय संग तुलना गरि मोबाईल बजारले धेरै फट्को मरेको छ र पहिला नेपालमा सीमित ब्रान्डहरु मात्र लोकप्रिय थिए भने आइले धेरै ब्रान्डहरु आएका छन । के अहिले मोवाइल मार्केटमा कस्ता …
Mar 2, 2017	1
‘ह्याकिङ’ शब्द सुन्नेबित्तिकै धेरै नेपालीले अझै ‘अपराध’ र ‘नराम्रो’ भनेरै बुझ्छन् । अरु प्रकृतिका अपराधीभन्दा ह्याकर अझै खतरनाक हुन् भन्ने सोच उनीहरुको छ । हुन पनि नेपालजस्तो देशमा वेब सेक्युरिटी निकै कमजोर भएकाले बारम्बार वेबसाइट डिफेस भइरहेका घटना देख्न/सुन्न पाइन्छ । यस्तो काममा लाग्नेहरु अनधिकृत रुपमा अर्काको सिष्टममा प्रवेश गरी डाटा हातमा लिन्छन, बिगारिदिन्छन् वा अन्य गैरकानूनी काम गर्छन् । …
क्यान इन्फोटेक २०१७ विथ मोबाइल एक्स्पो कम्प्यूटर एसोसिएसन अफ नेपाल क्यान महासंघ कास्की साखाको आयोजनामा तथा पोखरा इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायी समितीको सह–आयोजनामा यही २०७३ फाल्गुण ५ देखि ८ सम्म सम्पन्न हुन गइरहेको आठौं क्यान इन्फोटेक २०१७ को सन्दर्भमा यस संस्थाका सचिव एवं सूचना प्रवक्ता रुकमागत भण्डारी (विश्वास) सँग लिइएको अन्तवार्ताको विवरण १. क्यान इन्फोटेक भनेको के हो ? क्यान महासंघ कास्कीका …